Toerana 11 tsara indrindra ho an'ny morontsiraka amin'ny fahavaratra 2019
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Toerana 11 tsara indrindra ho an'ny morontsiraka amin'ny fahavaratra 2019
Mety tsy hahatsapa ho toy ny any ivelany io, fa ny fahavaratry ny taona 2019 dia eo akaiky eo ihany. Ary tsy misy fotoana tsara kokoa noho izao mba handaminana ny fandosiran'ny morontsiraka fahavaratra. Rehefa dinihina tokoa, miantsena ho Villa amoron-dranomasina ary ny toeram-pialan-tsasatra any amin'ny toeran-dranomasina dia hahatsapa ho tsara kokoa ianao amin'ny mari-pana mangatsiaka amin'ny lohataona. Etsy ambany, ho hitanao ireo toerana 11 tora-pasika ankafizinay indrindra ho an'ny 2019, ao anatin'izany ireo toerana fialantsasatra mahafinaritra amin'ireo sasany izay matetika latsaka ao ambanin'ny radara.
Raha mitady toerana tsara tarehy sy hafahafa miala sasatra feno ianao, dia Cancun, Mexico, mety ho toerana mety aminao. Cancun no iray amin'ny toerana malaza indrindra amin'ny fialan-tsasatra amoron-dranomasina efa am-polony taona maro, ary mora ny mahita ny antony. Ny masoandro mandavantaona, ny morontsiraka maresaka, ny rano turquoise, ny sakafo hafahafa, ary ny hafanana mahavariana dia mahatonga azy io ho tonga lafatra làlana amin'ny fialantsasatry ny fahavaratra.
Rano manga mangatsiaka, tara-masoandro tsy misy sakana ary fitsangantsanganana mahatalanjona, Chania, tanàna any amin'ny morontsiraka avaratrandrefan'i Kreta, no toerana itodihan'ny fahavaratra farany ary ny taona 2019 no taona hitsidihanao. Na mitady fitsangatsanganana ianao, na fitsangatsanganana na filentehan'ny masoandro fotsiny, dia manana zavatra hatolotra ireo mpitsidika amin'ny sokajin-taona rehetra sy ny fahalianana i Chania. Ny jiro sy seranana Venetiana tamin'ny taonjato faha-14 dia tsy maintsy jerena rehefa mitsidika ny tanàna grika manan-tantara.
Chania ihany koa dia misy sambo ambany fitaratra maromaro vonona handray ny fitsidihan'ny fitsidihana ireo sokatra sy trondro goavambe ary koa ireo fiaramanidina mpiady amin'ny Ady lehibe II nianjera tany amin'ny rano Cretan. Na inona na inona fanapahan-kevitrao hataonao any Kreta, dia ho tsapanao fa ny nosy lehibe indrindra any Gresy, ary Chania manokana, dia toerana fialantsasatra amin'ny fahavaratra.
Tahiti, Polinezia frantsay
Tahiti dia lisitry ny siny, ary na dia nosy lehibe indrindra ao Polinezia frantsay aza izy, dia paradisa tropikaly tokoa. Manomboka amin'ny lagoon manga mankamin'ny lanitra feno lanitra feno kintana, Tahiti dia iray amin'ny toeran-kaleha tsara indrindra eto an-tany. Ny hetsika ara-kolontsaina tena izy izay mitranga isan-taona ao Tahiti dia mahatonga ny nosy ho tanjona tsara hiaina ny kolontsaina sy ny fahasamihafana ao amin'ny Pasifika atsimo.
Punta Cana, Repoblika Dominikanina
Ny morontsiraka fotsy Punta Cana dia mendrika ny carte postcard dia azo antoka fa hahatonga ny fahavaratry ny 2019 ho tadidinao. Raha mitady fialan-tsasatra miala sasatra sy mahafinaritra ary feno masoandro ianao, dia Punta Cana no toerana mety aminao. Izy io dia tranon'ny izay matetika no laharana amin'ireo morontsiraka tsara indrindra eto an-tany ary koa toeram-pialan-tsasatra be loka. Ny sasany amin'ireo hetsika azo atao ao amin'ny tanàna fialan-tsasatra amoron-tsiraka dia misy fisidinan-drivotra, fisitrihana scuba, kayak, sambo haingam-pandeha, fiantsenana ary maro hafa. Ny faritra an-dranomasina manodidina ny tanàna dia nambara fa valan-dranomasina tamin'ny 2012, ka nahatonga azy io ho toerana mety hijerena ny fiainana an-dranomasina ambanin'ny fanambonin'ny ranomasina.
Florida dia manana morontsiraka mahafinaritra indrindra eto an-tany miaraka amin'ny fasika mainty, fotsy, ary voajanahary izay mifangaro ao anaty rano manga mangarahara. Ity fanjakana atsimo any Etazonia ity, dia manolotra nosy manokana mitokana ihany koa ho an'ireo mpitsidika mba hiala sasatra sy hankafy raha tena mitady handositra ny adin-tsaina rehetra amin'ny fiainana izy ireo. Ny toetr'andro dia mety amin'ny vanim-potoana rehetra, fa ny fahavaratra dia rehefa tena miaina ho an'ny mponina sy ny mpizahatany i Florida. Tsy mila mivezivezy eran'izao tontolo izao ianao vao hahatratra ny paradisa tropikaly.
Gold Coast, Aostralia
Ny Gold Coast any Aostralia dia iray amin'ny toerana tsara indrindra eto amoron-dranomasina. Raha mitady andro feno masoandro, fasika ary fialamboly kilasy tontolo izao ianao, dia tokony ho eo an-tampon'ny lisitry ny lohataona ny Gold Coast. Noho ny lalao Gold Coast Commonwealth tamin'ny taon-dasa, lasa toerana tonga lafatra kokoa hitsidihana ny tanàna noho ny fampandrosoana haingana ao amin'io faritra io. Ny trano fisotroana sy trano fisakafoanana dia mety amin'ny fijerena ny masoandro milentika sy ny fety miaraka amin'ny mponina rehefa avy tontolo andro ny masoandro sy ny ranomasina.
Marmaris dia fantatra fa manana ny kely fotsiny amin'ny zava-drehetra manomboka amin'ny morontsiraka misy azy ka hatrany amin'ny fasika fotsy lava, izay mahatonga azy io ho tonga any amin'ny fahavaratra 2019. Ny lohasahan'i Marmaris any an-tendrombohitra Mountains sy ny rano manga kristaly dia toerana mafana ho an'ny fanatanjahan-tena amin'ny rano, indrindra ny antsitrika sy ny sambo.
Fitsangatsanganana ho azy ny fiantsenana any Marmaris. Ny afovoan-tanàna dia manana fivarotana eny amin'ny magazay mitady izay zavatra irin'ny fonao rehetra. Torkia dia toerana fitsangantsanganana malaza ratsy eran'i Eoropa hatrizay, ary i Marmaris dia niaina hatramin'ny taloha.
Ankoatr'izay, Marmaris dia manolotra tantara manan-karena tsy azo lavina. Ny tranoben'i Nimera Cave sy ny Marmaris dia tavela amin'ny kolotsaina Tiorka taloha, iray amin'ireo artifact vitsivitsy tavela taorian'ny horohoron-tany 1957 izay saika nanimba tanteraka ny tanàna. Ny fiainana amin'ny alina any Marmaris koa dia iray amin'ireo fiainana velona indrindra any Torkia rehetra, miaraka amina lavaka manondraka sy toerana mozika mivantana hanatanterahana ny andro fitsangantsanganana amoron-dranomasina sy fitsangatsanganana.
Seychelles, Afrika Atsinanana
Raha tianao ny miala sasatra amin'ny fijerena fasika sy ranomasina tsy misy fanelingelenana, ny Seychelles dia toerana mety hiantsoana trano amin'ity fahavaratra ity. Any amin'ny rano mafana sy mangarahara amin'ny ranomasimbe Indianina, ity nosy 115 ity dia isalasalana fa haka rivotra.
Ny ranomasina dia mety amin'ny fisitrihana ary koa ny filomanosana sy snorkeling mba hijerena ireo karazan-trondro sy haran-dranomasina tsy tambo isaina izay mivelona ao ambanin'ny ranomasina. Ary ireo ao amin'ny vondrona misy anao izay tsy dia manintona amin'ny ranomasina dia hankafy ny fitsangantsanganana any anaty ala mikitroka eo akaiky eo. Ny toetrandro mety sy ny toerana tsy hita resy dia antony vitsivitsy fotsiny nahatonga an'i Seychelles ho lisitry ny siny nandritra ny am-polony taona maro. Hamarino ity toerana eo an-toerana ity amin'ny lisitrao amin'ity fahavaratra ity.
Toerana tsara ho an'ny olona te hiala sasatra sy miala sasatra amin'ny morontsiraka volamena malefaka ny Bahamas ary iza no tsy manao? Ity nosy milamina ity, fantatra amin'ny hatsaram-panahiny milamina, no iverenan'ireo mpitia amoron-dranomasina eran-taona isan-taona noho ireo fihinana mahafinaritra ao amin'ny nosy. Mahatalanjona ihany koa ny fiainana an-dranomasina eto, ka mahatonga azy io ho toerana mety indrindra amin'ny fitsangatsanganana snorkeling, antsitrika ary hetsika anaty rano hafa.
Côte D'Azur, France, dia iray amin'ireo toerana fialantsasatra fahavaratra tsara indrindra any Eropa. Na ny fiandraiketana malaza any Monte Carlo na ilay tanàna fialantsasatra tonga lafatra ao Cannes, ny morontsiraka volamena lava dia mahatonga anao hahatsapa ho toy ny taona vitsivitsy miala ny korontana sy ny fahabetsahan'ny ankamaroan'ny tanàna eropeana ianao. Tsy isalasalana fa ho tia miala sasatra eny amoron-dranomasina ianao ary mijery ireo olona tsara tarehy mipetraka eo.
Maldives, Azia atsimo
Ny nosy Maldives dia tena iray amin'ireo firavaka satro-boninahitry ny ranomasimbe Indianina. Ahitana nosy haran-dranomasina maherin'ny 1,000 sy atoll 26, io no toerana mety hipetraha sy hiala sasatra tanteraka eo ambanin'ny hazo palma mihetsiketsika. Na izany aza, ny Maldives dia fantatry ny sasany amin'ireo traikefa nahafinaritra indrindra eran'izao tontolo izao, toy ny snorkeling, antsitrika, surf ary maro hafa. Ny nosy dia mety amin'ny fandosirana ireo adin-tsaina amin'ny fiainana andavan'andro ary milentika any amin'ny tontolo voajanaharinao. Eto ianao dia afaka mipetra-pialana sasatra fotsiny rehefa mijery izao tontolo izao mandalo.
Ny fikarakarana ny tenanao amin'ny fialan-tsasatra amoron-dranomasina amin'ity fahavaratra ity dia tsy misy dikany fa sarotra ny misafidy toerana tonga lafatra. Misafidiana iray amin'ireo toerana 11 any ambony, dia tsy maintsy tadidinao ny fahavaratry ny 2019.
Fitsidihana an'i Maorisy: Inona no fomba tsara indrindra hanofana fiara atsy Maorisy?
India mikendry ny fidiram-bola amin'ny alàlan'ny fizahan-tany golf